Ravinala Airports –Ivato: ho vita amin’ny febroary 2019 ny passerelles | NewsMada
Ravinala Airports –Ivato: ho vita amin’ny febroary 2019 ny passerelles
Mandeha ny asa fametrahana ireo passerelles telo amin’ny fanitarana seranam-piaramanidina Ivato, ataon’ny Ravinala Airports. Ny volana oktobra teo no tonga ireo fotodrafitrasa vaovao ireo, nanombohana ny asa ny lafiny teknika hifandraisana amin’ny fitobian’ireo fiaramanidina. Nisy taorian’izay karazana andrana hanitsiana ny fampiasana azy ireo. Kasaina ho vita amin’ny febroary 2019 ny asa rehetra.
« Hanatsarana ny kalitao ny asan’ny Ravinala Airports ny fisian’ireo passerelles ireo ho fanomezana fahafaham-po ny mpandeha. Tsy atahorana intsony ny toetr’andro. Azo isarihana kaompania hafa hiditra eto an-toerana izany hanehoana fa manana fotodrafitrasa manara-penitra iraisam-pirenena Ivato », hoy ny tale jeneralin’ny Ravinala Airports, i Patrick Collard
Azo alavaina 18 hatramin’ny 41 m ireo passerelles ireo, miankina amin’ny fiantsonan’ny fiaramanidina. Nomena fiofanana ny mpiasan’ny Ravinala Airports, misahana izany, hahay hifehy ny fitantanana ny seranam-piaramanidina. Mampita izany amin’ny mpiasa malagasy ny nivoahan’ireo fitaovana ireo, hampiasa azy araka ny fepetra iraisam-pirenena.
Mampiasa olona miisa 1000, mivantana na tsy mivantana, ny Ravinala Airports, sy ny orinasa malagasy hafa miara-miasa aminy. Efa vita izao ireo asa lehibe, an-dalana fanaovana azy ireo karazana asa ao anatiny ; hatomboka izao ny fiantsonan’ny fiarakodia eo amin’ny toeran’ny toby miaramila taloha. Hatao hahazaka mpandeha 1,5 tapitrisa isan-taona io seranam-piaramanidina vaovao io.